"खै स्कुल खोलाले बगायो!" - ढोरपाटन पोष्ट
२०७७ माघ २५, आईतवार १४:०४
भदौ १७ गते राति भूजिखोलामा आएको बाढीले बोबाङका स्थानीयको धनजन बगायो । जस्ले त्यहाँको जनजीवन यसै प्रभावित छ । अभिभावक गुमेका वालवालिका, आफन्त गुमाएका परिवार र सम्पत्ति, जायजेथा र घरवास नै उजाडिएका स्थानीयलाई जीवन चलाउन सकस छ ।
घटनापछि तत्कालिन समयमा राहत र उद्धारका नाममा तीनै तहको सरकारले त्यहाँको अवस्था हेरेर फर्कियो । त्यहाँको दर्दनाक अवस्था हेरेर सरकार जसरी फर्कियो, उसरी भेलले उजाडेको मानवीय क्षति, भौतिक क्षेति फर्केन । मध्य रातको चीर निद्रामा परेका बोबाङवासीलाई भेलबाढीले, वस्ति बगर बनायो । ३७ जनाको नरसंहार गरिदियो । २२ जनाको शव भेटिएपछि अझै १५ जना अज्ञात छन् । सयौं मानवीय जनजीवनको विचल्ली बनायो । आजपनि उनीहरुको आँखामा आशु र दर्दका रोदन जीवित देखिन्छन् । पीडितहरुको देखभाल गर्ने राज्य भने आफै चीर निद्रामा छ । उसको स्वार्थले बेला-बेला जाग्छ, फेरि निदाउँछ । तर बोबाङवासीको आशुले दर्दभित्रका पात्रहरुलाई सधै जगाईरेको हुन्छ ।
भदौको मध्यममा आएको बाढिपछि, हेलिकप्टरबाट संघीय राज्यका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङदेखि यस क्षेत्रकाट निर्वाचित सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र बिपक्षी दलका नेताहरु पीडितकहाँ पुगे । हलुँगो रहत फाले, गह्रुँगो भाषण बालेर फर्के । गृहमन्त्रीले तत्काल पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट वजेट व्यवस्था गरेर घरवार विहिनको घर बनाउने बोल्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले, आफ्नो प्रदेशको जिम्मा आफूले लिने भन्दै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले भूजिखोलाको बाढीले बगाएर क्षति पुगेका सबै संरचना तत्काल खडा हुने भाषण गर्नुभयो । संघीय तथा प्रदेश सरकारका साँसदहरुले पहलकदमीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए आफ्नो बाटो हिंडे ।
स्थानीय सरकार प्रमुखले यो जिम्मेवारी मेरो भनेर दावी गरेका समाचारहरु अहिले फर्केर पढ्न सकिन्छ । तर घटनास्थलमा पुग्दा, त्यहाँका जनजीवनसँग भेट्दा गरेका वाचाहरु ७ महिनासम्म पनि अधुरा किन भए । त्यसपछि प्रतिवद्धता बोल्नेहरु फर्केर किन गएनन ? अहिलेको चिसो कठग्रीने मौषम त्यसमाथि हिमपात भइरहेको छ । उनीहरुको जनजीवन प्रति खै कस्ले चासो राख्ने र जिम्मा लिने ? स्थानीयले यस्तै तमाम गुनासाहरु छन् ।
खुल्ला आकास र धुलाम्मे चौरमा नानीवाबु :
भदौ १७ मा आएको भीषण बाढीले बगर बनाए ढोरपाटन ९ सुप्राङ स्थित यस विद्यालयको बालकक्षा सहित ४ कोठे भवन सहित खेल मैदान, धारो र शौचालय सबै बगाएको थियो । घटना सबैलाई थाहा छ । त्यहाँका नानीवाबुहरु कहाँ कसरी राखेर पठाउने भन्नेमा कसैको चासो देखिएन ।
भूजीखोलाको तिरमा यत्तिकै पनि चिसो हावा चल्छ । ठूलै मान्छेको जाडोले दम घोटिन्छ । विद्यालयमा अध्ययनरत १ सय ५० जना बालबालिका अहिले त्यही चिसो सिरेठोमा काँपी काँपी भोलीको भविश्य खोज्दैछन् । ढोरपाटन जाने सडकको पारिपट्टी आलुभण्डरको सानो घर छ, त्यसछेउमा रहेको खुला मैदानमा धुलाम्मे भएर साना बच्चाहरु पढिरहेको आवाज सुनिन्छ । कक्षा कोठा भन्ने अर्थ रहेन, सबैलई गालाकार बनाएर शिक्षकहरु पढाएको दृष्य त्यहाँ देखिन्छ ।
जहाँ जे देखियो । हाम्रो आफ्नै सामाजिक संस्कार स्कुल बनाउने नै भन्नेमा ध्यान जानु हो । हामीलाई मन लाग्यो भने, स्थानीयको सक्रियतामा ठूलै भवन सहित नयाँ स्कुल बनाएका इतिहास छन् । के भूजिखोलामा त्यस्ता सामाजिक अगुवाहरु छैनन होला ? जस्ले आफ्ना नानीवबुहरु पढ्ने अस्थायी छानो सहितको टहरो बनाउन सक्दैनन् ? यो स्थानीय सामाजिक व्यत्तित्वहरुको कमी कमजोरी हो । राज्यलाई देखाउन त्यसो गरिएको होे भनेपछि, त्यो दर्द नदेख्ने राज्यलाई नजिकबाट खबरदारी गरिनुपर्ने हो । जनताको नसुन्ने राज्यमा को छ ? किन सुनिदैन ? प्रश्न, प्रश्नका लागि होईन तर साना बालबच्चाहरुको भविश्यका लागि पढाइएको होला, जीनदगीनै धरापमा राखेर भविश्य देखाउनुको अर्थ के होला ? आज धुलामे भएर पढेको नानीबाबु भोलीको भविश्यमा आजका जस्तो शासन सत्तामा पुगेभने, आजका शासकलाई के भन्लान ?
अर्कोतर्फ यथार्थमा हालत देखेपछि महसुस हुन्छ खै बोबाङमा राज्य तहको उपस्थिति ? जनताको सबै भन्दा नजिकको राज्य सत्ता स्थानीय सरकार हो । त्यो हविगत हेरेर हामी जनप्रतिनिकिो बडेमानको कुर्सीमा कसरी अटायौं होला । जनताको सेवामा भुत्ते भाषण कुन नाकले बाल्यौं होला ? सामान्य छाप्रोसम्म बनाउन नसकिने नै हो भने, देशमा समृद्धि, सुशासन, समाजवाद बेकार कुरा भएनन् र ? नभए त धुलाम्मे पखेरामा नगरपालिकाका नानीबाबु पढ्छन भन्दा ईज्जज भोट हाल्नेको जाँदैन । माग्नेहरुको नै जान्छ होला ।
स्थानीय जनता भन्छन् । हाम्रो समस्या राज्यको तल्लो निकायअ र्थात स्थानीय सरकारले नै देख्न चाहेन । हामीकहाँ अउँदैन । असुविधा भयो भन्न जाँदा हुन्छ हुन्छ भन्दै यति समय वित्यो । भनाई पीडित मनबहादुर विकको होला तर जटिलता त्यहाँका तमाम पीडितहरुको हो ।
घरवास विहिन भएकाहरुले थातवास पाएनन् :
यस्तै एक पिडित ढोरपाटन नगरपालिका वडा नंं-९, का होमबहादुर बिकले बाढीले बगाएर श्रीमतीमात्र गुमाउनु भएन, सारा सम्पत्ति र पैतृक जग्गाजमीन समेत गुमाउनुप्रयो । अहिले होमबहादुरसँग नत, साथ दिने श्रीमती हुनुहुन्छ, नत, बास बनाउने जग्गा जमीन नै छ । आफू विदेश भएको समय आएको बाढीले होमबहादुरको जीवन संगिनी कुमारी बिकलाई सदाका लागि छुट्टयाइदियो । त्यत्तिमात्र भएन विदेशबाट कमाएर पठाएको रकले सुरु गरेको पसल र भाईभाई छुट्टभिन्न हुँदा पाएको जग्गा जमीन सबै लगिदियो । होमबहादुर अहिले भाइको जग्गामा स्याउलाले बारेके टहरामा जीवन गुजारा चलाइरहनुभएको छ ।
होमबहादुरका ६ र ८ वर्षका दुई स-साना छोरा छन । चिसो मौसम सुरुभएको छ । खाली पखेरामा स्याउलाले बारेको छाप्रोमा उनीहरुको जीवन चलिरहेको छ । सबै गुमाएको पीडा थाम्न नसकी होमबहादुर बेला बेला बेहोस हुने गरेको उहाँकी आमा खीमी विकले बताउनुभयो । ‘आफ्नो छोराले सबै गुमायो, अवस्था नराम्रो छ, त्यहीपनि सरकारले घरवास बनाइदिन्छ कि भनेर नगरपालिकामा सोध्न गयौं, तर अहिल्यै घसवास बन्ने छाँटकाँट नभएको उहाँले बताउनुभयो ।’
बाबाआमा र दाजुभाईसँग छुट्टिएर नजिकैको भूजीखोला नजिकै पसल समेत सुरुगरी श्रीमती छाडेर विदेश जानुभएका होमबहादुर गत वर्षसम्म राम्रैसँग जीवन गुजरा भएको बताउनुहुन्छ । कोरोनाका कारण विदेशमा समेत ७ महिना लकडाउनले बेरोजगार बस्नुभएका होमबहादुरलाई भदौ १७ गतेको बाढिले महाविपत्ति निम्त्यायो । भूजिखोलाको बाढीले, होमबहादुराको जीवन उजाड बनाएको खबरसँगै गाउँ फर्किएपछि आफ्नो सम्पत्ति, घर, जग्गा कहाँनेर थियो भन्ने कुनै अत्तो पत्तो छैन । हिजोको पुख्र्यौली सम्पत्तिमा अहिले बगर छ । जताततै ढूँगा मूढामात्र थुप्रिएको छ ।
‘जति पीडा, दुःख, दर्द परे पनि जसोतसो सम्हालिनुको विकल्प हुँदो रहेनछ, होमबहादुरले, आँखाभरी आशु लिनुभयो र भन्नुभयो, मन भक्कानिन्छ, यिनै दुई नावालकको मुख हेरेर बाँचेको छु । वास बनाउने थातथलोपनि छैन, सरकारले पनि गरिवलाई हेर्दो रहेनछ ।’ यसरी नै छाप्रोमा जीवन चलेका उहाँ बताउनुहुन्छ ।
विभिन्न व्यक्तिले खाद्यान्न र केही लत्ता कपडा दिएको तर नगरपालिकाबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको होमबहादुरले दुखेसो पोख्नुभयो । श्रीमतीको उहाँले मृत्यु बापतको २ लाख रुपैयाँ भने आफूले पाएको होमबहादुरको भनाई छ । उक्त रकम छोराहरुको भविष्य र पठनपाठनका लागि बैंकमा खाता खोलेर राखिदिएको बताउनुहुन्छ ।
जनताको कुरा छाडियो, आफ्नै ध्याउन्नमा लागियो :
भूजिखोलामा बाढी गएको यतिलामो समयसम्म तीनवटै सरकारले त्यहँका पीडितहरुको समस्या समाधान गर्दैन । हामीले देख्यौं, अहिले त आफू—आफुमा को कता भन्नेले राज्य धरापमा छ । जनमुखी नीति कार्यक्रमको मौषम पनि रहेन । कस्ले कस्लाई कति गाली गलैज गर्ने र तिनै पीडितहरुको मतमा खेल्ने भन्ने आशय देखियो । बोबाङमा बाढिपीडितका बालबच्चा धुलोमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यतामा भयो । यो त त्यहाँका स्थानीय सरकारले पहिला देख्न पर्ने हो । आजका जनप्रतिनिधिहरु समस्या हेरेर कानमा बतास लाउँदैन । जसरी नेताहरु एक अर्कालाई गालीगलौज गरेर मोज लिन्छन नि त्यसरीनै यहँ आएको बेला भन्नु छ, स्थानीय पीडित आक्रोसित हुँदै बोल्छन् ।
बिद्यालय बगर बनेपछि केही सहयोगीहरुको राहत रकमले नयाँ ठाउँमा विद्यालय बन्दै छ । राज्यकोषबाट समेत वजेट आएछ तर निर्माण अधि पठनपाठन हुनुपर्ने भए कै खाली चौरमा धुलोमा पढाउदा राज्यको ईज्जत बढ्यो होला ? होइृन भने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकरका जनप्रतिनिधिहरुले त्यसमा ध्यान नदिएको भन्ने स्थनीयको आक्रोस सत्य छ । चुनावमा सबै गर्छम भन्न्ेहरुलाई भोट हालेर जिताइयो, अहिले नाकमुख देख्न पाईदैन, जनताको समस्या जहाँको त्यहीं छ । यो स्थानीयको बोली हो ।
विद्यालयको समस्या लिएर स्थानीय सरकारसमक्ष पुगेका जनचेतना प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर घतिले पनि समस्या नबुझ्ने सरकार प्रति गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । विद्यालयको समस्या बताउँन जाँदा आफ्नै जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाबाट उल्टै अपमान भोेगेर फर्किनु परेको उहाँको गुनासो थियो । नगरपालिकाले सबै स्कुलले आफ्ना नानीबाबु पढाउन नगरपालिकाले उर्दि त गरयो तर स्कुल नै नभएको ठाउँका वालवालिका कसरी पढाउने भन्ने, नत वडाले चासो राख्यो, न नगरपालिकाले । बाढी बगाएको स्कुल नाममा छ । भौतिक अवस्थामा छैन । खुला चौरमा लगेर बालबच्चालाई पठाउदा बस्ने बेन्च छैन, कालोपाटि छैन, पानी झरी परे ओत नै छैन । शौचालय नै छैन । अव गर्ने के ? प्रधानाध्यापक घर्तिले दुखेसो पत्रकारहरुसँग यहाँको समस्या सुनाईदिन पोख्नुभएको थियो । यसका विषयमा निवर्तमान संघीय सांसद देवेन्द्र पौडेल र गण्डकी प्रदेश सांसद खिमबिक्रम शाहीको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि केही नगरेको विद्यालयको गुनासो गर्नुभयो ,
अहिले विद्यालयमा दुई कोठे भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ । पुर्नर्निमाणबाट ट्रसको भवन निर्माणका लागि २३ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएको छ भने ढोरपाटन नगरपालिकाबाट शौचालय निर्माणका लागि ७ लाख बजेट परेको प्रअ घर्तिले बताउनुभयो । स्थानीय युवाको पहलमा सुप्राङमा ३० लाख रुपैयाँमा तीन रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ ।
के छ समस्या :
यो समस्याको समाधान नभएको होईन । नेपाल सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई बाढिग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको पनि ५ महिना वित्यो । घरवास गुमाएकाहरुलाई घर बनाउने योजना स्थानीय तहसम्म आइपुगेको छैन । ढोरपाटन नगरपालिका वढा नं. ८ का वडा अध्यक्ष हरीबहादुर घर्तिका अनुसार नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर, त्यहाँको घर बनाईदिन भनेको कुरा आएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारको वजेटले पुग्दैन, प्रदेश र संघले कार्यक्रम नल्याउँदा समस्या आएको अध्यक्ष घर्तिको भनाई छ । यता बाडिपीडितहरुको लागि विभिन्न सायोगी संस्था, व्यत्तित्वबाट करिव अढाई करोड रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा छ । तर समस्या को कस्को घर बनाईदिने भन्ने एकिन तथ्याँक नगरपालिकाले लिन नसक्दा, वास्तविक पीडितहरुले दुःख पाएको देखिन्छ । स्थानीयका अनुसार वास्तविक घर नबनाई नहुनेको संख्या ५०/५५ हुनसक्ने बताउँछन् । तर नगरपालिकले २ सय बढीको घटना मुचुक्ला उठाएर पूर्णक्षति भएको भन्ने विवरण प्रदेश र संघीय सरकारलाई बुझाएको छ । वडाले दिएको जानाकारी अनुसार वडा नं. ९ र ८ मा गरि ९७ घर बनाउनुपर्ने अर्थात पूर्ण क्षेतिभएको मुचुल्का उठाइएको छ । यकिन विवरण नभएकै कारण पुनः सही विवरण ल्याउन वडा नं. ७, ८ र ९ का वडा अध्यक्षलाई नगरपालिकाले निर्देशन गरेको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रवत्ता दीपक थापा बताउनुहुन्छ ।